Dhacdo Xanuun Badan lagula Kacay Aabe &Gabadhiisa Xerada Ifo - iftineducation.com
Dhacdo Xanuun Badan lagula Kacay Aabe &Gabadhiisa Xerada Ifo
aadan21 / July 26, 2012
iftineducation.com – Warar Faah Faahsan ayaa laga helayyaa Oday Xalay lagu dilay xirada IFO xilli uu damcay in koox soo weerartay uu ka difaaco Gabdho uu dhalay, hase ahaatee markii dambe isaga xabado lagu tiriyay.
Dilkan ayaa Xalay Fiidki hore ka dhacay Block B-12 ee xirada IFO oo kamid ah xirooyinka ku yaal Dhadhaab, waxaana wararka ay intaasi ku darayaan in Kooxihii dilka geystay ay goobta isaga baxsadeen.
Si aan u helno Faah Faahin dheeraad ah oo ku saabsan dilka Odayga ayaa Qadka Telefonka ee IFO kula xariiray Qof Goob jooge ah oo ku sugan Block B, inkastoo uu diiday in magaciisa lasoo xigto sababo xaga ammaanka ah.
” Walaalow Odayga waxaa la dhihi jiray Baashe, Harqaanle ayuu ahaa, wuxuu dagnaa Block B-12, runtii aqoonna waan u lahaa oo wuxuu ahaa Shaqsi masaakiin ah oo bariiska qoyskiisa ugu raadin jiray harqaanka”.
Waxaa dhacday Xalay in 3 ruux oo labo kamid ah ku hubeysnaayeen Qoriga AK47-ka ay damceen in ay xoogaan micnahii ay kufsadaan Gabdho uu dhalay AUN Baashe lakin Odayga aabahood ah wuu ka diiday in raga hubeysan gabdhihiisa xoogaan”.
” Qaddar kooban ayuu la dagaalamay Kooxihii Burcada ahayd, intuu la dagaalamayay ragaas manaxayaasha ah ayuu Gabdihii ku yiri Carara intaad carari kartaan, Sidaas ayeyna Gabdhihii ku badbaadeen oo ku carareen”.
” Lakin Allaha u naxariistee Odayga ayaa Xabado lagu tiriyay, Meesha ayuuna ku geeriyooday, Insha Allah maanta la duugayaa marka sidaas ayey wax u dhaceen” ayuu yiri Marqaati[Wittnes] u waramay iftineducation.com
Arintaan ayaa Shacabka ku dhaqan IFO ay aad uga caroodeen, iyadoo dilkan fooshan xun ee xalay dhacay uu qeyb ka yahay Amni darrada ka taagan Xirooyinka Dhadhaab gaar ahaan IFO oo aysan jirin Ciidan wax ka qabta.